I-China 16oz Glass Disapenser ye-China kunye nomzi mveliso we-Silicone Funnel kunye nabaxhasi | IHoyer
I-16oz Glass yeSepha yokuSasaza ngeSilicone Funnel
Ukuhonjiswa kwendlu okumnandi: Uyilo lwebhotile, imigca ethe tye ekumgangatho uphakamileyo, uyilo oluhle notyhidi-skid. Ingasetyenziselwa ukubamba isepha, i-sanitizer yesandla, isibulala-ntsholongwane, njl njl. Ifanelekile isinki yekhitshi, igumbi lokuhlambela ngesandla, ukuhlamba umzimba. Ilungele ikhaya lakho, iofisi, ihotele, indawo yokutyela, njl.
Umthamo: I-455ml / 16 oz
Ukuphakama: I-190mm / 7.5 intshi
Ububanzi: I-76mm / 3 intshi
I-MOQ: I-20,000pcs, ubuncinci bemali iyamkeleka ukuba sinesitokhwe
Umgangatho ophezulu nokhuseleko: Umhlwa wokuthintela isepha yokuhambisa usasaza ipomputha yentsimbi yangempela engama-304, iinxalenye zeplasitiki zokuhambisa isepha zamkela iplasitiki yokutya ekumgangatho wokutya, ngaphandle kweBPA.
Ukuba awusithandi ngokupheleleyo isilwanyana sethu sokuhambisa isepha, nceda uqhagamshelane nathi kwangoko. Ulwaneliseko lwabathengi abayi-100 yeepesenti inkonzo yethu yobomi bonke.
Le ntsalela yesepha ilungile ekusetyenzisweni kosapho okanye izipho zosapho, izipho zoSuku lukaMama, imitshato, izipho zeholide.
Ifanelekile kwigumbi lokuhlambela, isicoci sekhitshi, ishampu, ilayisi, njl njl.
I-transparent yeglasi yebhanti yepompo yokuhambisa isepha yenziwa nge-18/8 ngentsimbi ye-304. Amacandelo eplastiki egalelwe isepha ziiplastiki ezikumgangatho wokutya, BPA-MAHHALA.
Ubungakanani Umthamo: 455 ml Ukuphakama: 190 mm Ububanzi: 76 mm Umthamo: 16 oz H: 7.5 intshi D: 3 intshi
Umbala Sula iglasi Ukuprinta okanye ukwenza umbala usebenze wamkelekile
I-MOQ Iipesenti ezingama-20,000 Inani elincinci liyamkeleka ukuba sinesitokhwe
Edlulileyo: I-Cobalt eluhlaza okwesibhakabhaka i-16 oz Boston ibhotile ejikelezileyo kunye nepeyinti yentsimbi engenasici
Okulandelayo: I-16 Oz Sula yeGlasi yeSepha yokuSasaza ngeMpompo eyiNickel
iglasi yesepha yeglasi
impompo yebhotile yelaphu
umthengisi webhotile ye-lotion
ibhotile yeglasi ye-lotion
I-4oz 120ml Amber Glass yeBoston ibhotile enesitshizi
I-Cobalt eluhlaza okwesibhakabhaka i-16 oz Boston ibhotile ejikelezileyo nebrashi ...